ठेगान नभएका अनमोल - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः आश्विन २१, २०७५ - साप्ताहिक
ठेगान नभएका अनमोल
अनमोल केसीले सधैं भन्दै आएका छन्— वर्षमा एउटा चलचित्रमा मात्र काम गर्छु । एउटा चलचित्र प्रदर्शन नभै अर्कोमा देखिन्न । थोरै तर स्तरीय चलचित्रमा काम गर्ने दाबी गर्दै आएका सुपर स्टार अनमोलले आफ्नै बोली काटेका छन् । दुई वर्ष खर्चिएर तयार पारिएको चलचित्र कृ असफल भएपछि उनले धमाधम चलचत्रि साइन गरेका छन् ।
आफ्नै होम प्रोडक्सनको चलचित्र क्याप्टेन प्रदर्शनको तयारीमा छ भने उनले मिलन चाम्सको ब्याचलर वन्टी तथा झरना थापाको ए मेरो हजुर–३ पनि साइन गरिसकेका छन् । झरना थापाको चलचित्र ए मेरो हजुर–३ शुभमुहूर्त सम्पन्न भै छायांकनमा जाँदैछ । यता मिलन चाम्सले यही वर्ष प्रदर्शन गर्ने गरी छायांकनमा समय नदिए अनमोलको ठाउँमा अर्का अभिनेतालाई लिन चाहेको स्रोतको दाबी छ ।
कतिसम्म भने अनमोललाई पटक–पटक सन्देश पठाइएको छ कि समय दिए ठीक छ, अन्यथा एड्भान्स रकम फिर्ता गर्नु । यदि ब्याचलर वन्टी यही वर्ष प्रदर्शनमा आयो भने अनमोलका तीन चलचित्र एकै वर्षमा प्रदर्शन हुनेछन् । यो उनको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिरको कुरा हो । यदि यी तिन चलचित्र प्रदर्शन भए भने अनमोललाई आफ्नै बोलीको ठेगान नभएका अभिनेता भन्दा के फरक पर्ला र ?
अमेरिका नजाने !
साप्ताहिक हेडलाइन्स : आज के– के छापियो ?
यस्ता छन् ‘प्रेमगीत ३’ का मुख्य अभिनेता जेष्ठ ३१, २०७६
शाकाहारी स्टार्स जेष्ठ ३०, २०७६
ज्यान बनाउँदै प्रदीप जेष्ठ २९, २०७६